नेपालमा मन्त्रीहरू पसल बन्द गर्न, सिल लगाउन, विजुली वा टेलिफोनको लाईन काट्न किन आफै हौसिन्छन् ? के मन्त्री यस्तै तोरिलाउरे काममा अल्झिरहन हो ? अनि मन्त्रीको काम के सचिव, सहसचिव वा उपसचिवले गरिदिने हो ? मन्त्रीको काम छापा मार्दै हिड्ने हैन, त्यो सम्बन्धित विभागका प्रमूखले गर्ने हो । तिनीहरूले काम गरे नगरेको अनुगमन मुल्यांकन रिपोर्टिंग लिने हो ।
सरकार कसरी चलाउने भन्ने बारेमा अधिकांस आलाकाँचा मन्त्रीहरू गवाँर हुन्छन् र तिनलाई सचिव र डिजीले आँट गरेर सिकाईरहनु पर्ने हुन्छ । तर अधिकांश मन्त्रीहरू मै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भ्रममा पर्ने गर्छन् र जथाभावी गर्न हौसिने हुनाले किन छुच्चो बन्ने भनेर मातहतका कर्मचारी मौन बसिदिन्छन् र मन्रीहरू हाँसोका पात्र हुने गर्छन् । मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको भिजन, दृष्टि, समस्या नबुझी बाहिरका उरन्ठेउला हितैषीको सल्लाह लागू गरेर आफूमात्र हैन मन्त्रालय र सरकारकै बेहाल बनाउने गर्छन् । यसमा त्यहाँका साहसी कर्मचारीले जति छुच्चो बन्न परे पनि बनेर देशहितका लागि मन्त्रीहरूलाई ट्र्याकमा राख्नै पर्छ । अहिले कर्मचारीले गर्न सक्ने ठूलो योगदान यस्तै हुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइँ छ ।
अमेरिकामा कुनै मान्छेले जिन्दगीभरि कमाएको धन उसको मृत्युपछि ८० प्रतिशत सरकारको हुन्छ भन्ने इन्हेरिटेन्ट कानुन (अपुताली) कानुन छ । यसकारण त्यहाँका मान्छेहरु कमाउछन् र मजाले खर्च गरेर जीवनको सुख भोग्छन् । मरेपछि उसको सन्तानले २० प्रतिशत भन्दा बढी अपुताली इन्हेरिटेन्स पाउदैनन् । त्यसैले धनि मानिसहरु फाउन्डेशन खोल्छन्, च्यारिटी दिन्छन्, त्यसमा दिएको रकम करमुक्त हुन्छ । मरेपछि सरकारमा जानुभन्दा आफ्नो नाममा खुलेको फाउन्डेशनले जनसेवा गरिरहोस् र नाम पनि रहिरहोस् भन्ने परम्परा छ । यी फाउन्डेशनहरु तिनकै सन्तान आफन्त वा नजिकका मान्छेहरूले नै संचालन गर्छन् र त्यस वापत लिन पाउने पारिश्रमिक पनि लिन्छन् ।
ईमानदार र क्रेडिबिलीटी भएको नेता भएमात्र जनताले पत्याउछन् । चुनावमा जित– हार, बहुमत–अल्पमत, सरकार बनाउने नबनाउने कुरा भनेको राजनीतिमा कुर्सिमा पुग्ने सामान्य तपसीलको खेल मात्र हो । तपसीलले मुलुकको दशा र दिशामा खासै फरक पार्दैन । संस्थागत प्रवन्ध लथालिंग भएको मुलुकमा राजनीतिमा क्रेडिबिलिटी भएको करिष्म्याटिक नेताबिना मुलुक रूपान्तरण हुदैन, भलै बहुमत वा दुईतिहाई वा तीनचौथाई वा सबै नै सांसदको सीट कुनै दलले जितेकै किन नहोस् ।
नेपालमा चुनाव सदाकाल हर्सोल्लास र धुमधामसंग शान्तिपूर्ण ढंगमा जात्राझैं सम्पन्न हुदै आएको छ । देश बनाउछु भन्नेले जनतालाई देश बनाउने अभियानमा चुनावताका देखिए जस्तो रौनक र सक्रियता कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसले निर्धारण गर्ने गर्छ । हैनभने जति प्राविधिक रूपले बलियो देखिएको सरकार भएपनि अनावश्यक घर्षण भएर शासन व्यवस्थामा कर्कश आवाज मात्र निस्कने हुन्छ । फोक्से मासु भएको निर्धो शरीरजस्तै हुन्छ ।
उपाध्या नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्